Uma kuziwa chess Grandmaster nabakhulu, ezingxoxweni wezwa amagama anjalo wesilisa, Fischer, Karpov nabanye. Kodwa lo mdlalo bokusungula, kukhona abesifazane omkhulu futhi ovelele. Nona Gaprindashvili iminyaka eminingi labetibambile ubuqhawe ngesikhathi lwabesifazane Championship.
Ikusasa umsubathi omkhulu futhi Grandmaster ngamazwe wazalwa ekuqaleni Meyi 1941 eGeorgia. Umndeni cishe yonke umlutha chess, kancane ngakho Nona Gaprindashvili Iyakwazi umdlalo kusukela zisencane. Lokhu lula yokuthi abafowabo njalo waxhumana futhi ngokwabo iqhaza imincintiswano edolobheni.
On ubuqhawe bakhe kuqala Nona kwavela ngengozi. Kwakumelwe khona abafowabo, kodwa omunye wabo ubanjwe umkhuhlane, futhi bawadinga ngokuphuthumayo ukuze uthole esikhundleni. Nona afakwe ohlwini, futhi owokuqala nje umphikisi wakhe, owayemdala kakhulu kunami nabanokuhlangenwe nakho okwengeziwe, yena ngokushesha wafaka uhlaka, futhi lokhu yabakhanga abaqeqeshi. Lapho ngineminyaka engu-12, wabhalisela ukufunda e-isikole chess.
Umqondisi kuqala futhi umeluleki Nona Gaprindashvili iba Karseladze Vakhtang Ilyich, abangagcini nje anakekela wakhe ngesikhathi ukuqeqeshwa, kodwa futhi bavikelekile kwezilaleli ezishisekayo futhi abalandeli ngesikhatsi seNdzebe yeMhlaba. Ukuze imiklomelo ephakeme nemincintiswano ku amazinga eziqinile abasha chess umdlali ekulungiseleleni umqeqeshi odumile wase-USSR Mikhail SHishov, wamsiza Grandmaster Aivars Gipslis.
Nona Gaprindashvili, chess umdlali, kuyinto yesibili none, futhi kuze kube namuhla, igcinwe isihloko sakhe irekhodi lesi sikhathi umdlalo - iminyaka engu-16. Ngo Championships okwalandela kwaba phezu 2nd noma 3 rd indawo.
Nona Gaprindashvili wazalelwa emndenini omkhulu. Yena kwakufanele Abazalwane asebekhulile ezinhlanu, ngenxa kwayo umxhwele chess. UYise Grandmaster esizayo wasebenza edolobheni ekolishi of Zugdidi, lapho ayehlala khona nomndeni wonke, uthisha accounting. Umama Grigol Ukholo, wahola yasendlini futhi ukuba zigcine ukuhleleka endlini.
NgeNdodana kaDavide kusukela ebuntwaneni ephelezelwa unina abadumile Championships futhi wayekhona cishe yonke emikhosini. Yena njengamanje usebenzela e-UK, kukhona uhlala nomkhaya wakhe. Ngezinye Nona Gaprindashvili, umzukulu futhi umzukulu naye ezama ukuhlangabezana kaningi ngangokunokwenzeka, okuyinto ayikuvumeli ukusetshenziswa yayo emisebenzini yomphakathi kanye nezombusazwe.
Winner of imiklomelo eminingi futhi impumelelo ngenxa ngomsebenzi wabo onzima iba Nona Gaprindashvili. Biography of the omkhulu chess abadlali abanesifiso umhlaba wonke. Nona buya kahle aziwayo futhi ethandwa, lapho eneminyaka engu-21 iwine isihloko iqhawe emhlabeni. Kodwa lapho kuxoxwa inkazimulo yakhe engu-15. Ngo imincintiswano abadala owesifazane osemusha ngemva kwenye ingamamitha izimbangi futhi babe iqhawe Georgia.
Winning labesifazane chess ubuqhawe ngo-1963 futhi ngokuphindaphindiwe uyonqoba eminyakeni 3, Nona Gaprindashvili umgomo - ukuba abe winner ukuncintisanela amadoda. Amahora ukuqeqeshwa kanzima isu kanye amaqhinga yomdlalo kwaholela yokuthi ngo-1978, ngemva ngokunqoba eziningi imincintiswano phakathi kwabantu Nona ukhishwa isihloko Grandmaster.
Ukulahlekelwa e ubuqhawe emhlabeni compatriot yakhe Maia Chiburdanidze, Nona futhi wahlala omunye kakhulu eminyakeni ezayo okungcono chess abadlali zomhlaba. Ngaphambi kuka-1990, wahlanganyela imincintiswano eminingi futhi Olympiads, ngokuwina imiklomelo nokungeza e piggy bank yakhe ekunqobeni entsha bese zobungoma. Yena waklonyeliswa nge-oda, izindondo emamaki udumo, hhayi kuphela ngenxa yalokhu kunqoba, kodwa futhi ngoba ekuthuthukisweni yomdlalo kuleli zwe.
Okwamanje, Nona Gaprindashvili, isithombe ongawabona kulesi sihloko, njalo ahileleke imidlalo ahlukahlukene kanye tournaments for Veterans futhi iwina imiklomelo. Ngokungafani nabantu abaningi nawozakwabo esitolo, waya embhedeni ngemva impumelelo kuzo zonke imigomo, futhi uyaqhubeka kutsi bahlanganyele impilo kanye nokuthuthukiswa imidlalo zakho ozithandayo.
Ngo-1991, ngemva kokuwa Union, e Georgia waqala ukwakha ezemidlalo ezimele kanye nezinye izinhlangano. Ehola iKomiti-Olympic kuze 1996 kwaba Nona Gaprindashvili, ngalesi sikhathi isivele owaziwa futhi imiklomelo chess umdlali. Sekuyisikhathi eside umongameli zokuhlonipha ye-National iKomiti-Olympic.
Ngo-2008, Nona Gaprindashvili ephethwe "Democratic Party of Georgia ngobunye 'futhi wasebenza kule ndawo iminyaka eminingi. Kusukela ekuqaleni kwenkonzo yakhe kuze kube namuhla omkhulu chess umdlali uzama ukuthuthukisa kanye popularize umdlalo.
Biochemistry Izinwele: luhle futhi lwadalwa
Umlingisikazi Isabella Rossellini: Biography, empilweni yakho, i-Filmography
Actress Brazilian Gloria Pires: Biography, ifilimu umsebenzi nomkhaya
Kanjani wendlala massage ekhaya?
Uzbekistan: Andijan - idolobha endala Fergana Valley
Indlela ukuze alulame iphasiwedi yakho ku-Skype?